Wasiirka Gaashaandhiga Somalia C/xakiin Fiqi oo gaarey Suudaan – idalenews.com
Wasiirka Gaashaandhiga Somalia C/xakiin Fiqi oo gaarey Suudaan
Wafti uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumada Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa xalay gaaray magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan,wasiirka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Khartuum si diiran ugu soo dhaweeyey masuuliyiin ka socday dowladda Suudaan iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaas Maxamed C/llaahi.
Wasiirka Gaashaandhigga dowladda Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa waxaa safarkiisa ku wehlinaya saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Gen. Muungaab iyo C/qaadir Macalin Nuur oo ciidanka u qaabilsan dhanka Saadka.
C/xakiin Xaaji Fiqi oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Khartuum ayaa sheegay in safarkiisu uu ka danbeeyey kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay dowladda Suudaan gaar ahaan wasiirka difaaca dalkaas.
Fiqi ayaa sheegay inuu wasiirka difaacada dalka Suudaan kala hadli doono sidii uu dalkaasi kaalin libaax leh uga geysan lahaa dib u dhiska la doonayo in lagu sameeyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya,oo ay socdaan dadaalo la doonayo in dib loogu dhiso cududii ciidanka qaranka Soomaaliyeed,dowladda Suudaan ayaa hore u ballan qaaday iney gacan weyn ka geysan doonto dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
Dalka Suudaan ayaa ka mid ah wadamada yar ee isgarab taagay ummadda Soomaaliyeed xiliyadii burburka waxaana lagu xasuustaa iney waxbarasho lacag la’aan ah u fidisay kumanaan arday Soomaaliyeed.
Dibadbax loogu soo horjeedo Maamulka Axmed Madoobe oo Kismaayo ka dhacey